Mankahatra ny Famoretana ao India, Mitazona ny Vohitra Misy Azy ho Lavitry ny Loza ireo Tanora Kashmiri Mpilatsaka An-tsitrapo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2016 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, عربي, English
Any amin'ny faritra maro ao Kashmir, tanora, olona mpilatsaka an-tsitrapo misaron-tava tsy manana fitaovam-piadiana no misafo ny vohitra misy azy amin'ny alina mba hampitandremana ireo fianakaviana amin'ny fanafihana mananontanona. Ity tantara lahatsary ity nampidirina any an-tampon'ity tantara ity dia avy amin'i Abid Salaam, mpikambana ao amin'ny Vondrom-piarahamonina Lahatsary An-tsitrapo, ary noraketina andro vitsivitsy talohan'ny nanombohan'ny famoretana goavana tao amin'ny Tanànan'i Baramulla Taloha nataon'ireo sampan-draharaha misahana fandriampahalemana ao Kashmir , Baramulla izay 55 km (34 miles) miala an'i Srinagar, renivohitry ny firenena Indiana ao Jammu sy Kashmir.
Fisamborana nanomboka fotoana vitsy taorian'ny namonoan'ny tafika Indiana an'i Burhan Muzaffar Wani, tovolahy 21 taona, mpitolona iray separatista malaza manana mpanjohy marobe ao amin'ny haino aman-jery sosialy. Narahina tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy hetsi-panoherana niely patrana nanerana ilay fanjakana Indiana izay ny Silamo no maro an'isa, ny famonoana ‘tsy ara-dalàna’ natao azy. Nampanahy ireo mpanao hetsipanoherana ihany koa ny fiakaran'ny fitiavan-tanindrazana Hindu ao India, ary indrindra miaraka amin'ny tsy fananana asa avo be, fisian'ny miaramila be loatra amin'ny toerany natao ho an'ny vahoaka, ary fanitsakitsahana matetika ny zon'olombelona ataon'ireo mpitandro filaminana indiana ao amin'ny fireneny. Mandritra ireo fihetsiketsehana, ny polisin'i Kashmir sy ny milisy ivelan'ny tafika dia nampiasa fitaovam-piadiana mahafaty, toy ny basy pellet sy ny basy fitondra manafika, niafara tamin'ny fahafatesana olona 85. Olon-tsotra mihoatra ny 13.000 ihany koa no naratra, an'arivony no jamba. Nisy fiantraikany teo amin'ny olona fito tapitrisa ny tsy fivezivezena amin'ny alina ary naharitra 53 andro tamin'ny ankamaroan'ny faritra, ary 85 andro tany amin'ny faritra hafa.
Nijanona ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina fa ny famoretana kosa mitohy ihany. Maro noho ny 450 ireo olona nanaovana fitànana an-tsoratra teo ambanin'ny Lalàna Filaminam-Bahoaka (PSA), lalàna iray izay ahafahana mampiditra am-ponja ny olona mandritra ny enim-bolana, tsy misy fitsarana .
Lehilahy sy tanora Kashmiri an'arivony no miafina, ny sasany maka fialofana eny amin'ireo sahan-kazo fihinam-boa manavatsava ny lohasaha. Fa satria manakaiky ny ririnina, maro ireo lasa mialoka any an-tranon'ny namany na havany lavitra, miova toeram-ponenana isaky ny andro vitsivitsy. Araka ireo olona eo an-toerana, maherin'ny trano 700 no nosavain'ny mpitandro filaminana.
Ao amin'ny lahatsary nasongadina ao anatin'ity tantara ity, ireo lehilahy sy tanora Kashmiri dia hita manafina ny tavany amina lambampaty fotsy noho ny fahatahorana ny Miaramila Indiana. Mampitandrina ny olona eo an-toerana mba hiambina hatrany ary ho mailo foana izy ireo amin'ny fivezivezeny amin'ny alina. Tsy matory ry zareo amin'ny alina. Ny sasany miteny fa tsy niverina tany an-tranony efa herinandro maromaro izay. Indraindray ry zareo mitsilany ambany hazo na trano mifanakaiky eny an-kalamanjana . Atahoran'izy ireo, raha tratra, ny hakàn'ny polisy sary azy ireo sy hitazonana azy ireo.
Araka ny manampahefana, mametraka loza mitatao ara-pandriampahalemana ny isan'ny mponina rehefa mirotsaka amina fanoherana mahery setra ny polisy ry zareo. Ny sasany nampangaina ho nanampy na niditra ho naman'ireo separatista mihoko mitolona ho amin'ny fahaleovantenan'i Kashmir na fangatahana ny fampitambarana azy amin'i Pakistàna.
— iKashmir (@icashmir) 31 Oktobra 2016
WH: Fisamborana nivatravatra, famonoana, fanapahan-dratsambatana ary fanajambana ny vahoaka, ny bemidina amin'ny alina no zavatra izay tena nanasaraka an'i #Kashmir tamin'ny ambin'i India
— ابن حسین (@polar_winds) 22 Oktobra 2016
Ny fisamborana tanora an'arivony noho ny antony tsy misy dikany no mety hanaporofo ny fitifirana ny sandrin'ny fikomiana mitam-piadiana ao #Kashmir.
Tazonin'ny governemanta Indiana ny filazàna fa manao famoretana amin'ireo separatista fotsiny ry zareo ary ny fisamborana ireo olo-malaza toy ilay mpiaro ny zon'olombelona Khurram Parvez, izay taty aoriana noraketina an-tsoratra noho ny lalàna PSA, mampiseho fa mandeha manejika ny feon'ireo mpanohitra ao an-dohasaha ry zareo.
Video Volunteers, vondrom-piarahamonina haino aman-jery iraisam-pirenena miorina ao Inde, dia mpizara-votoaty miara-miasa amin'ny Global Voices ary efa nahazo loka iraisampirenena .